Uyaveva umsakazi weGagasi olaxazwe abaphathi engalindele | News24
Uyaveva umsakazi weGagasi olaxazwe abaphathi engalindele
Durban - UNomfundo Clarissa oshayela uhlelo lwasemini olubizwa ngeBig Bang olungena ngehora le-12 kuya kwelesithathu ntambama, kubikwa ukuthi udinwe uyabitoza ngesenzo sabaphathi bakhe sokumkhipha kulolu hlelo.
Imithombo yeLANGA LangeSonto esondelene naye ipotshozele leli phephandaba ukuthi uNomfundo useswele lapho angaya khona, ashiye phansi kulo msakazo ngoba ubona ukuthi isenzo sabo sisho ukuthi abaliboni ikhono lakhe lokusakaza.
UNomfundo uzogcina ukusakaza lolu hlelo ekupheleni kwenyanga, njengoba selinikwe uDJ Lesoul ozobambisana noFelix Hlophe. Phambilini lolu hlelo belusakazwa nguKini Shandu ngokubambisana naye uNomfundo kodwa uKini wahamba eGagasini.
Ngemumva kokuhamba kukaKini uNomfundo uke walubamba yedwa kwase kwafakwa uFelix.
NgoLwesine kuleli sonto lesi siteshi sethule uhla lwabasakazi abazoqala ngenyanga ezayo ezinhlelweni ezahlukene.
OLUNYE UDABA:Bayabalwa abasakazi abafana noKhathide Ngobe
Kulowo mcimbi kuvele ukuthi uNomfundo usezobika nge-traffic ohlelweni lwantambama, oluzoshayelwa ngoDJ Sphectecula noDJ Naves abasuka emsakazweni ohlonishwayo iMetro FM. Baphinde bamnika uhlelo lwangoMgqibelo oluqala ngehora lokuqala kuya kwelesine ntambama. Ebuzwa yileli phephandaba ngamahlebezi okudinwa kwakhe uphikile wathi yena ujabule.
"Bayangisukela, ngijabule kabi mina, futhi ngibona ngikhulile ngoba sengiyosebenza ohlelweni olukhulu kanti futhi nakhona ngizobe ngisawubambile umbhobho," kusho uNomfundo.
Uphinde wathi, okumjabulisa kakhulu ukuthi uyosebenza noSphectecula noNaves, okungabasakazi abahlonipha kakhulu.
"Kufana nokuthi kufezeke iphupho kumina. Kwakuvele kuyiphupho lami ukusebenza nalaba basakazi," kuqhuba yena.
UNomfundo uthi akayi ndawo yena, ngeke awushiye lo msakazi kodwa ufuna ukukhulela kuwona.